आजको राशिफल २०७८ साल भाद्र ४ गते शुक्रबारGandaki Press
आजको राशिफल २०७८ साल भाद्र ४ गते शुक्रबार
भदौ ४, २०७८ ०५:४३ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल भाद्र ४ गते शुक्रबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ अगस्त २० तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, वर्षाऋतु, चान्द्रमान अनुसार श्रावणशुक्लपक्षको त्रयोदशी तिथि वेलुका ७:५५ बजेसम्म, त्यसपछि चतुर्दशी रहनेछ ।
मेष : महत्वपूर्ण कार्यको थालनिले उत्साह उमंग छाउनेछ । सृजनशिलता र क्रियाशिलताको बृद्धि विकास हुनेछ । नयाँ मित्र बनाउने अवसर मिल्नेछ । व्यवसायबाट राम्रै आम्दानी हुनेछ । कर्म भाव खुलेको छ ।
वृष : धार्मिक कृत्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । टाढिएका आफन्तजनसँगको सम्बन्धमा सुधार हुनेछ । समय सुधारोन्मुख रहनेछ । वैदेशिक क्षेत्रका अपूरा कार्यले स्थान पाउनेछन् । स्वास्थ्यको भने ख्याल राख्नुहोला ।
मिथुन : आर्थिक लेनदेनमा विवाद बढ्नेछ । शारीरिक कमजोरीको महशुस हुनेछ । असन्तोषी प्रवृत्तिले सताउनेछ । अष्टम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गरेका निर्णय त्यत्ति प्रभावशाली रहने देखिन्न ।